Isizinda se-Ultrasonic Terpene esivela kwaBotanicals - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Isizinda se-Ultrasonic Terpene kusuka kwaBotanicals"
I-Terpenes yisigaba esikhulu futhi esahlukahlukene semakhompiyutha e-organic, akhiqizwa yizitshalo ezahlukahlukene, ikakhulukazi ama-conifers, nangezinambuzane ezithile. I-Terpenes ikhombisa ukunambitheka okuhlukile, iphunga, nephunga, kepha inezinye izici eziningi ezithile, ezibenza babe yinto ebalulekile esetshenziswa ekudleni, izimonyo, emakhemisi kanye naku-biotechnology noma emithini yokubulala izinambuzane yemvelo. Iningi lama-terpenes libonisa izakhiwo zezinto ezilimaza umzimba, ezibenza bakwazi ukulwa namagciwane kanye namagciwane angaba yingozi. Ama-terpenes amaningi, isib. Beta-caryophyllene, ayaziwa nangokuthi ama-anti-inflammatory kanye nokunciphisa izinhlungu, okubenza bangene i-analgesic.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ekhethiwe yokukhulula ama-terpenes kusuka ku-matrix yeseli yama-botanicals (isib. Cannabis, hops, neem, menthol njll.). Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusekelwe kumgomo we-acoustic cavitation, ophula iseli lesitshalo futhi ukhulise ukudluliselwa kwesisindo phakathi kokuphakathi kweseli nokuxazulula okuzungezile. Izinzuzo eziphambili zokukhishwa kwe-ultrasonic yisengezo esiphelele ngokwengeziwe, futhi inqubo esheshayo, emnene, engeyona yokushisa.
Ukuhluka Okukhulu Kwe-Terpenes
Njengamanje, kukhona ngaphezu kwe-20,000 ama-terpenes akhonjwe.
Ama-terpenes avelele kakhulu futhi aziwayo yi-caryophyllene, i-limonene, i-pinene, i-linalool, i-humulene ne-myrcene.
I-Caryophyllene yi-sesquiterpene etholakala kabanzi emafutheni amaningi abalulekile, ikakhulukazi uwoyela obalulekile weCannabis sativa, i-clove, irosemary, ne-hops. Ibhekene nephunga le-spice noma le-peppery futhi isetshenziselwa kakhulu imiphumela yayo yokugaya ukudla, analgesic kanye ne-antibacterial.
Humulene yi-terpene etholakala emapheshana, emvinini, naku-basil, eyayisebenzisela imiphumela yayo yokulwa nokuvuvukala ne-antibacterial.
I-Limonene yi-cyclic monoterpene, futhi isakhi esikhulu emafutheni wezithelo zamawolintshi. Kusetshenziswa kabanzi njengesiqholo sephunga, isengezo sokudla kanye ne-solvent kuma-ejenti wokuhlanza.
IPinene, otholakala isb kuma-restins amanye ama-conifers amaningi, asetshenziswa njengendawo yokwenza amakha kanye nomkhakha wamakhemikhali.
Linalool, otholakala isib emint, i-laurel, izihlahla ze-birch, isithaphuthaphu esisetshenziswa kabanzi kanye nephunga.
I-Myrcene yi-monoterpene, etholakala isb in cannabis and hops. Ngenxa yephunga lawo elimnandi, ungumlamuleli obalulekile osetshenziswa embonini yamakha.
Amafutha we-Hemp noma uwoyela we-CBD konke ukufutheka ngezinzuzo zako zezempilo ezihlukile. Indlela yokukhipha kanye nemishini, esetshenziselwa ukwahlukanisa ama-cannabinoids esitshalweni se-hemp, inethonya ikhwalithi nokukhishwa kawoyela we-CBD…